လျှော်သုံးပြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဆောက်လုပ်ရေး - HelpMEHemp
သြဂုတ်လ 05, 2020
Fအသစ်အပင်များသည်ကြွယ်ဝသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည် နှင့် utility လျှော်၏။ လျှော် ဖွစျနိုငျ နီးပါးများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် အားလုံး- စက္ကူကနေအဝတ်အစားအထိပင် ဘို့ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဆောက်လုပ်ရေး။
အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် အစားအစာ၊ ဆီ၊ ဖိုင်ဘာ၊ဘာသာရေးအခမ်းအနားများပင်ဖြစ်သည်, လျှော်သိသိသာသာအခန်းကဏ္ played မှသိရသည် လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး. Hemp သည်တစ်ချိန်ကကမ္ဘာပေါ်တွင်ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ယနေ့အဖိုးတန်ဆုံးသီးနှံတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်.
မင်းမှာကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ကူးရှိကောင်းရှိမယ် လျှော်ဆိုတာဘာလဲ ပြီးတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲ. လျှော် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၏ strain အ ဆေးခြောက် sativa စက်ရုံ. ဒါပေမဲ့ ၎င်း၏ဓာတုမိတ်ကပ်, အသုံးပြုမှုနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် များမှာလုံးဝ ဆေးခြောက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ လျှော် ctetrahydrocannabinol ပမာဏကိုသာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသည်။THC), ဆေးခြောက်တွင်တွေ့ရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒြပ်ပေါင်းများ။
ဒီသွယ်လျသောအပင်သည် ၁၅ ပေအထိကြီးထွားနိုင်သည် အဖြစ်အထူ အချင်းလက်မ။ မတူတာက ''အိုး'' it is အိမ်တွင်းလျှော်စိုက်ပျိုးရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးs ၎င်း၏အမြစ်များပြန့်နှံ့ဖို့လိုအပ်ကတည်းက။ ဒါဟာအစကြီးထွားနိုင်ပါတယ် အမျိုးမျိုး ရာသီဥတု၏။
Hemp သည် dioecious စက်ရုံဖြစ်သည် နည်းလမ်း it ရှိပါတယ် အမျိုးသမီးများနှင့်အထီး အပင်. လျှော်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် အဆီများနှင့် ဆေးလိပ်ထံမှထုတ်ကုန် အိုင်စီတီ ပန်းပွင့်နှင့်အရွက်များနှင့်ပရိုတိန်း ကုန်ပစ္စည်းများ ၎င်း၏မျိုးစေ့ကနေ။ စက်ရုံ၏အတွင်းပိုင်းအလွှာ ပါဝင်ပါသည် ခက်ခဲတဲ့ဖိုင်ဘာ ကြောင်းများစွာရည်ရွယ်ချက်များဆောင်ရွက်ပါသည်.
စက်ရုံ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းကို၎င်းကိုခေါ်သည် ကဗျာ။ လူအများစုကဤအပိုင်းကိုစက်ရုံ၏သစ်သားအမာခံဟုရည်ညွှန်းကြသည်,၎င်း၏စုပ်ယူနိုင်မှုအတွက်လူသိများ, ထူးဆန်းသော acoustic နှင့်အပူဂုဏ်သတ္တိများတစ်ကောင်းစွာအဖြစ် cellulose အကြောင်းအရာ။ လျှော်ကိုအသုံးပြု။ ရေရှည်တည်တံ့ဆောက်လုပ်ရေးဒီ feature စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု.
Hemp ကွန်ကရစ်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဆွဲဆောင်မှုရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောလူများကကျယ်ပြန့် arra ဝါကြွားကတည်းကလျှော်သုံးပြီးရေရှည်တည်တံ့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူပေါ်လာပြီနေကြသည်ကောင်းကျိုးများ၏ y အလွန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေဖြစ်ခြင်းနေစဉ်.
ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျှော်အသုံးပြုမှုအသစ်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ hဝင်းနိုင်ထွန်း ခဲ့ အသုံးပြုခံ့ နေစဉ်အတွင်း အာရှဒေသများရှိကျောက်ခေတ်.ရှေးဟောင်းသုတေသနအထောက်အထား အကြံပြုs အိုးနှင့်ကြိုးများတွင်လျှော်၏အပြောင်းအလဲနဲ့အသုံးပြုမှုကို5ရာစုမှစ။ ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု အိႏၵိယ ထို့အပြင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် လျှော်အင်္ဂတေ in 30 ကျော်ကျော်မျက်နှာကျက်, နံရံများနှင့်ကြမ်းပြင် Elloraဂူ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြသခဲ့သည်aသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့်၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများတိုးပွားလာခြင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စားသည် တစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူနိုင်သော 40% စုစုပေါင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ၏ ၄၀% နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေ၏ ၂၅% အသုံး. စွမ်းအင်နှင့်သယံဇာတသုံးစွဲမှုတွင်ဆောက်လုပ်ရေး၏အရေးပါမှုကြောင့်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင်လျှော်တန်ချိန် ၅၀၀၀ ရှိသည် အသုံးပြုခံ့ တစ် ဦး တည်းပြင်သစ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးသည်။ Hကဗျာ ကမ္ဘာ၏ဤအပိုငျးတှငျအသုံးပြုခဲ့သည် အသုံးပြုမှု ရိုးရာလျှော်နှင့် သံပုရာသီး များတွင်အသုံးပြု ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း။
လျှော်ကိုအသုံးပြု။ ရေရှည်တည်တံ့ဆောက်လုပ်ရေး အများစု၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ် hempcrete. Hempcrete is ၁၅% သည်ကွန်ကရစ်ကဲ့သို့သိပ်သည်းသည်၊ သေးသေး မြောs ရေပေါ်မှာ။ လေထဲပိတ်မိသွားတယ် hempcrete, သောထောက်ပံ့ပေးသည် ကွောကျဘှယျသော insulator တွင်လည်းနှင့် breathability ။ Thဒီအရည်အသွေးတွေကရှိပါတယ် များအတွက်အသုံးဝင်သည် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ဆူညံသံနှင့်အပူနှစ်မျိုးလုံး။
လူများစွာသည်စိုက်ပျိုးကြသည်e ယင်း၏၏လျှော် မယုံနိုင်လောက်သော အသုံးsဆောက်လုပ်ရေးအတွက်။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျှော်ကိုသုံးခြင်းမှအဖိုးတန်အားသာချက်များရှိသည်။
Hemp သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဆောက်လုပ်နိုင်သောပစ္စည်းများအရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ မည်သည့်ရာသီဥတုတွင်မဆိုကြီးထွားနိုင်စွမ်းနှင့်အတူဒေသထွက်ထုတ်လုပ်သောသစ်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားပေးသည် ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကျော်ပစ္စည်းများနှင့် ယင်းဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများကိုပံ့ပိုးရန် စားသုံးသူများနှင့်လယ်သမားများအတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျှော်ကလူကိုသာပေးနိုင်သည် ပိုကောင်းတဲ့အဆောက်အ ဦး ပစ္စည်းs, ဒါပေမဲ့ အခြားကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အာဟာရဓာတ်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အညိုရောင်ကွင်းများကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့်အသုံးပြုမှုကြောင့်သစ်တောပြုန်းတီးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည် အောက်ပါ တောမီး။ ဒါတင်မက ဒါပေမဲ့ လျှော်ကိုလည်းသီးနှံလည်ပတ်အတွက်ကောင်းစွာဒဏ်ငွေ ယင်း၏ကြောင့်အရွက်များသည်အော်ဂဲနစ်ကိစ္စများဖြစ်ပြီးအမြစ်များသည်မြေဆီလွှာကိုလျော့ကျစေသည်။ ဒီသဘာဝပါပဲ ဆေးတစ်ခွက် လုပ်s ထိုပြည်၌ ပိုပြီးဒဏ်ခံ တိုက်စားမှုဆန့်ကျင်။
ကာဗွန်ရှာဖွေရာတွင်လည်း ၃၂၅ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ရရှိသွားတဲ့ ခြောက်သွေ့လျှော်တစ်တန်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့။ ဒါကြောင့်လျှော်၏အသုံးပြုမှုကို ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းစေသည် လေထုထဲတွင်. featuring တိုင်းအဆောက်အ ဦး နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံလျှော်ကိုအသုံးပြု။ ရေရှည်တည်တံ့ဆောက်လုပ်ရေး စတိုးဆိုင်s ကျယ်ဝန်းသော ကာဗွန်ပမာဏ.
လျှော် အထွက် ခြောက်သွေ့သောကောက်ရိုး၏ ၂.၅ မှ ၈.၇ တန်အထိရှိသည် နှုန်း က ဒါ ငွေပမာဏ သိသိသာသာဖြစ်ပါတယ် ပိုမိုမြင့်မား အခြားစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ၏အထွက်နှုန်းထက်။ ဥပမာ, ဂျုံကောက်ရိုး သာထုတ်လုပ်သည် ၁.၂၅ မှ ၂.၅ တန်အထိရှိသည် နှုန်း က ကလာသောအခါ ထုတ်လုပ် ဇီဝလောင်စာ စွမ်းအင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လျှော်ကြေးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသီးနှံဖြစ်သည်.
အိမ်သုံးပစ္စည်းများသည်အိမ်များတွင်အရေးအပါဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည် အလွန် စျေးကြီး။ သို့သော်သင်၏ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ insulator တွင်လည်းတည်ရှိပြီးဖြစ်ပါကမည်သို့လုပ်မည်နည်း။ ဒါ အကျိုးကျေးဇူးသည် လျှော်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သော။ Sလျှော်ကိုအသုံးပြု။ နှစ်သက်သောဆောက်လုပ်ရေးသိသိသာသာသင့်ရဲ့လျော့နည်းစေလိမ့်မယ် အဆောက်အဦး ပေးရs.
Sလျှော်သုံးပြီး ustainable ဆောက်လုပ်ရေး အများအပြား features တွေ အားသာချက်များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပါအဝင် အစိုဓာတ်ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ခုခံ။ Thအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိတယ် ပစ္စုပ္ပန်ထူးခြားတဲ့စက်ရုံ - ဖိုင်ဘာလျှပ်ကာပစ္စည်းများအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှ, သစ်သားဖိုင်ဘာများပါဝင်သည် နှင့် ဆယ်လူလာ။ ဒီမှတဆင့် လျှော် ထိန်းသိမ်းရန်sပင်စိုထိုင်းသောအခြေအနေများတွင်သမာဓိရှိ။
လျှော် အခက်အခဲ များမှာ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစိုဓာတ်များစွာသိုလှောင်ထားနိုင်သောအခြားအပင်အမျှင်ဓာတ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည် ယင်း၏၏ စိမ်ဖွဲ့စည်းပုံ။ လျှော်၏အစိုဓာတ်ကိုစွမ်းရည်သိုလှောင်လည်းခွင့်ပြုပါတယ် it ၎င်းကိုလိုအပ်သည့်အခါအစိုဓာတ်ကိုယူပြီးအခြေအနေများပိုကောင်းလာသောအခါ၎င်းကိုထုတ်လွှတ်ရန်။ A၏ကုဗမီတာ လျှော် စတိုးဆိုင်များ ပတ်ပတ်လည် 596 ကီလိုဂရမ် ရေငွေ့၏။ ဒီအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကမြင့်မားတဲ့နေရာတွေမှာတောင်ရွေးချယ်စရာကောင်းပါတယ် အဆင့်ဆင့်စိုထိုင်းဆ။
အဆင့်မြင့်သော pH အဆင့်ရှိခြင်းအပြင် သံပုရာသီး ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးနှင့်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးများလည်းပါသည်။ ဘယ်တော့လဲaထုံးအပေါ်ယံပိုင်း၌တည်ရှိ၏ အ hempcrete ရောနှောခြင်း၊ မှိုသည်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအဆင့်သည်ပြီးပြည့်စုံသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပံ့ပိုးပေးသည့်တိုင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါ မှိုတိုးတက်မှုနှုန်း။ ဤအချက်များမှ၎င်း၏ခံနိုင်ရည် အဲဒါကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေတယ် အအေးနှင့်ပူနွေးသောရာသီဥတုတွင်နေထိုင်သောလူများအတွက်။
လျှော်အလွန်သိပ်သည်းသည်။ ဒီအင်္ဂါရပ်ကတစ်ခုစေသည် များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရင်းအမြစ် အခြေခံအုတ်မြစ်s နှင့်အဆောက်အ ဦ ဖွဲ့စည်းပုံs,ဒါကြောင့်အလွန်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သည်။ Wဘောင်အားလုံး နှင့်နှစ်ဆလုံး fram လျှော်၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်တည်ဆောက်ပုံအားလေးလံသောဝန်များအောက်တွင်သို့မဟုတ်ကွေးနေခြင်းမှကူညီနိုင်သည်။ လျှော်၏တင်းကျပ်အဖြစ်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းထားသောမျက်နှာပြင်ကြောင့်၎င်းကို Excel ဖြစ်စေသည်အင်္ဂတေ finish ကိုများအတွက်ရွေးချယ်မှုထုတ်ချေးကကတည်းက မလိုအပ်ပါဘူး အပိုဆောင်း Bond အေးဂျင့်များသို့မဟုတ်ကွက်။
လျှော်ကိုအသုံးပြု။ ရေရှည်တည်တံ့ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်နိုင်ခြေကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ် by ညင်သာပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းကိုအသုံးပြု ၎င်း၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်။ လျှော်စိုက်ပျိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင်အခြားသီးနှံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုးသတ်ဆေးအနည်းငယ်သာပါ ၀ င်သည် ကဲ့သို့ ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်စပါး။ ကွောငျ့ ဤ ကြီးထွားလာလျှော် အင်္ဂါရပ်များ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းပါးသည် မှစ. it မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းစေသည် မြေဆီလွှာ၊ ရေ, နှင့် လေ.
လျှော်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးနောက်ခြောက် မ ဓာတ်ငွေ့ကိုမချွတ်ပါနှင့်esနှင့်အဆိပ်။ လျှော်၏အစိုဓာတ်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းသည်စိုထိုင်းသောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောလေကြောင့်ဖြစ်သည့်မိုးလုံလေလုံပတ်ဝန်းကျင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
လျှော် အသုံး နိုင် positively ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုထိခိုက်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဆောက်လုပ်ရေးသည်ရေခဲတောင်၏ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မြေဖို့ခြင်းအတွက်ဖြိုဖျက်ရန်, rs အဆိပ်အတောက်ဖြစ်သော နှင့်မီးလောင်ရာအားဖြင့်ဖြန့်ချိအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ ပလပ်စတစ်နှင့် အ အကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ် အဝေးမှ တစ်ခါသုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ကောက်ရိုး။ Wလိမ်လည် ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ ဤအတိုင်းအတာရှိပါတယ် ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်အဆုံးစွန်သောဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ချေ။
Hemp သည်ပလတ်စတစ်ကိုအဆိပ်မဟုတ်သောအစားထိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်း နိုင်
ကားအစိတ်အပိုင်းများမှစက္ကူသို့ပရိဘောဂအထိပင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သြစတြေးလျလူမျိုးတစ် ဦး
ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်လုပ်ရန်လျှော်နှင့်ရေကိုသာအသုံးပြုသည် ပလပ်စတစ်အစားထိုး ဖြတ်လို့ရပါတယ်
စက်, လွဲချော်သွားတာ, ရိုက်, လျှက်ရှိကြောင်းအရောင်နှင့်သစ်သားတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြီးဆုံးသည်
နှင့်သစ်သားပူးတွဲmposites အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်အားလုံးဖွဲ့စည်းထားပါသည် နေစဉ် Eco-friendly နှင့်ဖြစ်ခြင်း
ဘီလီယံနှင့်ချီသောလူများသည်သူတို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုမှီခိုကြသည် အာဏာကို ကားများ, မီးစက်, နှင့် ကွန်ပျူတာများပင်။ ဤပြန်လည်မဖြည့်တင်းနိုင်သောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်သည်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်ဇီဝလောင်စာကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုကြသည် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်.
သို့သော်များစွာသော အစီရင်ခံစာများ ကြောင်းအကြံပြု ဇီဝလောင်စာအချို့s လာစမ်းပါaမတ်စောက်သော ကတည်းကစျေးနှုန်း အချို့ ကောက်ပဲသီးနှံများသည်တစ်ချိန်ကလူများထင်သကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မသင့်တော်ပါ။ လျှော်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်ကတည်းက နီးပါး၌တည်၏ မည်သည့်အပူချိန်မဆိုမြေဆီလွှာကိုပိုမိုကျန်းမာစေပါသည် စိုက်ခံရပြီးနောက်ထိုသို့ ယခု ထည့်သွင်းစဉ်းစားaလောင်စာ အရင်းအမြစ် ဘို့ စက်မှု application များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ။ လျှော် mass- ခဲ့လျှင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်နိုင်တယ် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစွမ်းအင်ပြည့်ဝသောဇီဝလောင်စာရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကိုစွမ်းအင်နှင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုတစ်ချိန်တည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
လျှော်ဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်ရန်လျှော်စေ့များကိုသူတို့၏ဖိအားနှင့်အဆီများထုတ်ယူရန်ဖိအားပေးရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်နေသည်, ရလဒ် အစိတ်အပိုင်းများကိုရ သိမ်းဆည်းသယ်ယူပို့ဆောင်နှင့်ဒီဇယ်ဆင်တူရောင်းချခဲ့သည်။ လျှော်အသုံးပြုခြင်းဖျက်သိမ်းရေး၏အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုပေးစွမ်းသည် ပုံမှန်ဒီဇယ်၏အနံ့။
ဘေးဖယ်ဇီဝဒီဇယ်အပြင် လျှော် ထို့အပြင်သောအီသနောများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာသို့လုပ်နိုင်ပါတယ် ဓာတ်ဆီထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်.အီသနော အစဉ်အလာ အနကျအဓိပ်ပါယျ frထိုကဲ့သို့သောမုယောနှင့်ပြောင်းကဲ့သို့သောကောက်ပဲသီးနှံ, ဒါပေမယ့်လုပ်နိုင်တဲ့ ထို့အပြင်ဖွဲ့စည်း ကစော်ဖောက်ခြင်းမှတဆင့် လျှော်၏။ ဒီမှတဆင့်, ဂျုံ -based ကောက်ပဲသီးနှံများကိုလုပ်နိုင် အပေါ်အာရုံစိုက်သည် အစားအစာထုတ်လုပ်မှု။
အဝတ်အစားအများစု ဒီနေ့ဆံ့ ဝါဂွမ်း၊ polyester, နိုင်လွန်၊ spandex နှင့် acrylic ။ သို့သော်ဤအရာများသည်သယံဇာတအရင်းအမြစ်များစွာသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မကောင်းပါ။ အထည်နှင့်အမျှင်များအတွက်ရေရှည်တည်တံ့သောအခြားရွေးချယ်စရာရှာဖွေနေတစ် ဦး ချင်းစီသည်, လျှော်သည် စံပြ ရှေးခယျြခွငျး. လျှော်နှင့်လုပ်သောအထည် များမှာဝါဂွမ်းထက်ရှစ်ဆပိုမိုအားကောင်း။ ၎င်းကိုရေတပ်မှကြိုးနှင့်ရွက်လွှင့်ရန်အတွက်ပင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ပစ္စည်း အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များ ၎င်းသည်ကြီးထွားရန်ပေါင်းသတ်ဆေးနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများမလိုအပ်သောကြောင့်ဓာတုအထည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရေမှီခိုရာမှဝါဂွမ်းကဲ့သို့မဟုတ်ပါ
Hemp ၏အသုံးပြုမှုသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုကျော်လွန်သည် နယ်ပယ်။ ဒီအံ့ plant စရာစက်ရုံလုပ်နိုင်တဲ့ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ရန်, ထိုကဲ့သို့သောလျှော်ဒိန်ခဲ, လျှော်နို့, လျှော်ပရိုတိန်းအမှုန့်နှင့်လျှော်ရေနံအဖြစ်။
နောက်ထပ်ထုတ်ကုန် လူကြိုက်များမှုအတွက်ရရှိမှု လျှော်အစေ့သည်။ ဤ superfood သည် Omega-3 fatty acids နှင့် protein များပေါများသည်။ ၎င်းတွင်မြင့်မားသော globulin ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
Hemp paper သည်ဘီစီ ၂၀၀ မှ ၁၅၀ အထိဖြစ်သည် တရုတ်ဟန်မင်းဆက်။ Hemp ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် စာရွက်စာတမ်း ဗုဒ္ဓဘာသာ နောက်ပိုင်းတွင် လျှော် စာပေနှင့်သမိုင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရာတွင်အရေးပါသည်, သောဝတ္ထုများပါဝင်သည် by Mark Twain နှင့် Gutenberg သမ္မာကျမ်းစာတို့ဖြစ်သည်။ Banknotes နှင့်စာတိုက်တံဆိပ်ခေါင်းများ ထို့အပြင်လောင်စာအရင်းအမြစ်အဖြစ်လျှော် featured.
Hemp သည်စက္ကူလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲရန်အလားအလာရှိသည်။ ဒီထုတ်ကုန်က နောက်ထပ် Eco-friendly ရွေးချယ်မှုသည်သန်းနှင့်ချီသောဟက်တာသစ်တောများနှင့်တိကျသောကျက်စားရာနေရာများကိုကယ်တင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် သစ်ပင်များနှင့်မတူဘဲသစ်ပင်သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာပြီးမြင့်မားသော cellulose concen လည်းရှိသည်tration, အတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း စက္ကူ။ ဆိုလိုတာကထုတ်လုပ်သူတွေကအချိန်နည်းနည်းနဲ့စာရွက်တွေပိုလုပ်နိုင်တယ်, ပိုနည်း အပင်များနှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပျက်စီးမှုနည်းပါးသည်.
Pဟုတ်တယ် ဒီနေ့နားလည် ဒီလျှော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအားကောင်းလာစေရန်အလားအလာများစွာရှိသည်။ ယခုအခါတိုင်းပြည်များသည်နှေးကွေး။ ရေရှည်တည်တံ့သောဆောက်လုပ်ရေးကိုပိတ်ပင်ထားသည် လျှော်ကိုအသုံးပြု ချွတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. စွမ်းရည်ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်သဘာဝနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်လူများသည်လှုပ်ရှားမှုနောက်ကွယ်မှသာလျှင်လိုအပ်သည်။